Wasiirka Kahortaga Iyo U Diyaar Garowga Masiibooyinka ee DDSI oo Kawarbixiyay Waxqabadkii Qorshayaashii Horumarineed ee Xafiisku uu Hirgaliyay 4 Sano ee Ugu Danbaysay. - Cakaara News
Wasiirka Kahortaga Iyo U Diyaar Garowga Masiibooyinka ee DDSI oo Kawarbixiyay Waxqabadkii Qorshayaashii Horumarineed ee Xafiisku uu Hirgaliyay 4 Sano ee Ugu Danbaysay.
Jigjiga(CN) Arbaco.Jan.28.2015, wasiirka ka hortaga iyo u diyaar garowga masiibooyinka (DPPB) ee DDSI mudane Mahamed Daahir Ismaaciil oo xafiiskiisa ugu waramayay qaarka mid ah warbaahinta deegaanka ayaa si mug leh u sharaxay guud ahaanba waxqabadka uu xafiisku hirgaliyay 4 sano ee ugu danbeeyay iyo u diyaar garowga sii xoojinta qorshayaasha 5 sano ee soo socto.
Waxaana uu wasiirku ugu horayntii ka warbixiyay ka jawaab celinta bulshada baahanayaasha ah, wuxuuna sheegay in si kor loogu qaado ka jawaab celinta uu xafiisku xoojiyay gaadiidka dhinaca gar gaarka bini aadanimada islamarkaana la dar dargaliyay ka jawaab celinta masiibooyinka iyada oo la soo iibiyay 24 baabuur oo waawayn oo raashinka daabula( fleet trucks).
Wuxuuna sheegay in deegaanka 4 sano ee ugu danbeeyay laga hirgaliyay nidaamka xulashada baahanayaasha dhabta ah ee bulshada lana gaadhsiiyay gar gaar dhan 1,517,383.74MT baahanayaasha deegaanka afartii sano ee ugu danbaysay. Waxaa kale oo uu tilmaamay wasiirku in baahanayaasha deegaanka la gaadhsiiyay aduun lacageed oo dhan 75,000,000 baahanayaal tiradoodu dhantahay 117,340 kuwaasi oo laga daboolay maaraynta nolol maalmeedkooda.
Sidoo kale wasiirku waxa uu tilmaan ka bixiyay in afartii sano ee ugu danbaysay in siwayn loo yareeyay halista masiibada (DRR) waxaa dib loogu celiyay islamarkaana dib u dajin loo sameeyay 1,189 qoys oo ay barakiciyeen masiibooyinka abaaraha ee soo noq noqda.
Waxaa kor la adkeeyay lorna loo qaaday ka qayb galka haweenka ee dhinaca barnaamijka maaraynta halista masiibooyinka iyo kobcinta awooda bulshada.
Mar uu ka waramayay wasiirku baraamijka digniinta hore ayaa waxa uu sheegay in la ururiy xogo ku taxa luqa digniinta hore lagana soo saaray warbixin bilaha ee bilkasta taasi oo 100% ka warbixinaysa dhamaanba degmooyinka deegaanka.
Masuulku isaga oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu sheegay in afartii sano ee la soo dhaafay la sameeyay 9 jeer daraasaad ku qotoma lix bilood leh ah ee Dayrta iyo Gu’ga laguna soo qiimeeyay xaalada roobabka iyo saamayntooda. Wuxuuna wasiirku sheegay in guulo wax ku ool ah laga soo hooyay dhinaca ka wacyigalinta bulshada masiibooyinka ka dhaca deegaanka iyo saamayntooda.
Ugu danbayntii waxa uu wasiirku sheegay in uu xafiisku si balaadhan ugu diyaar garoobay meelmarinta qorshayaasha 5 sano ee fooda inaga soo haysa.